Firefox Hack: Ku Raadso Bloggeyga adoo adeegsanaya furayaal | Martech Zone
Talaado, Janaayo 23, 2007 Axad, Oktoobar 4, 2015 Douglas Karr
Matt at The Daanyeerka Net ayaa igu helay inaan fekero maanta. Wuxuu raadinayay eray asagoo adeegsanaya astaamaha lagu garto Firefox. Ma hubo inaad waligaa tan isticmaashay laakiin waa waxa ugu fiican abid. Lagu dhisay Firefox waa calaamadaha soo socda:
dict - Qaamuuska kor u fiiri
xigasho - Raadinta Google ee keydka: wadaha
Micnaheedu waxa weeye inaad si fudud erey ugu raadsan karto adigoo garaacaya:
Garaac gala oo waad heshay! Wacnaa? Hagaag xitaa sifiican, waxaad ku qori kartaa astaamahaaga gaarka ah Firefox! Waa tan sida:
Tag Calaamadaha Calaamadaha> Abaabula Calaamadaha
Midig u guji Raadinta Degdegga ah oo xulo Calaamadeyn Cusub
Kor ayaa u yimid wadahadalkaaga waxaadna ku buuxin kartaa naftaada% s sida xariga bedelkaaga.
Marka waa tan sida aad u sameysmi karto keymark si aad u raadiso bartaada adoo adeegsanaya WordPress:
Hadda waxa kaliya ee aan u baahanahay waa inaan qoro:
Iyo natiijada baaritaanka ee boggeyga "feedburner" ayaa soo bixi doona!
Waxaa jira boqolaal siyaabood oo aad u adeegsan karto… koodhkan raadinta, raadinta tiknoolajiyada, raadinta alexa kaliya ka fikir dhammaan madaddaalada aad heli karto!
Cusboonaysiinta: Waa kuwan qaar ka mid ah astaamaha muhiimka ah ee qabow ee lagu daro:
Google Codesearch ee Java
Jan 23, 2007 saacadu markay ahayd 8:27 PM
moly quduus ah in waxtar leh!
Jan 23, 2007 saacadu markay ahayd 9:33 PM
Mahadsanid Sterling! Waxyar ayaan ku daray qoraalkii asalka ahaa.
Kani waa kan aan jeclahay: